काठमाडौँ, १८ फाल्गुन: यस दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ । परिसूचक बढेपनि यसदिन कारोबार रकम भने बढ्न सकेन । अघिल्लो दिनको तुलनामा सो दिन कारोबार रकम रू. २२ करोड ४० लाख घटेर रू. ३२ करोड ५ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १४ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन बीमा समूहको परिसूचक ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ६६ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशलव ७१ प्रतिशत र जलविद्युतको शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको हो । वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक भने शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ ।